Allgedo.com » 2012 » August » 08
Home » Archive Daily August 8th, 2012 Beesha Reer Dalal Diini oo qaadacay habka loo soo xulay xubnaha ka midka noqonaya Baarlamaanka Cusub (Sawiro iyo maqal) Aug 8, 2012 Caabudwaaq, Somalia (AOL) – Kulan ay maanta yeesheen qaybaha kala duwan ee beesha Reer Dalal diini ayaa si cad loogu dhaliilay wakiilka Ugaaska Beesha Sade-Bari Axmed Bare Cali Xaabuun iyo Nabadoon Jaamac shire.
Waxaana beeshu ay si cad u sheegtay maanta in aanay aqoonsanayn wakiilka ugaaska oo ay kala laabteen kalsoonidii maadaama uu sameeyay iska horkeenid beesha dhexdeeda isla markaana uu... Madaxweyne Shariif oo degmo ka dhigay deegaan lagu magacaabo Ceel Baraf oo ka mid ah gobalka Sh/dhexe. Aug 8, 2012 Madaxweynaha dowladda TFG Shariif Sheekh Axmed ayaa degmo ka dhigay deegaanka Ceel Baraf ee gobalka Sh/dhexe ka dib wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa wareegtadiisa ku sheegay in baahi badan ka dib oo loo qabo in degmo laga dhigo Ceel Baraf ay ogolaadeen waxaana wareegtadiisa u qorneed sidan.
Markuu Arkay: Qodobka 39-aad farqadda 1-aad Xarafka “a”... Dadweyne taageersan Maxamed C/laahi Farmaajo oo maanta dibad baxyo ka dhigay magaalada Muqdisho, iyo sawirada Farmaajo oo gaadiidka lagu xardhay. Aug 8, 2012 Dadweyne taageersan Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ka sameeyeen dibad bax aad u xoogan oo ay ku dalbanaayaan in madaxweyne loo doorto Farmaajo.
Dadkaan ayaa galabta saacado badan xiray wadada Makka Al-mukarrama ka dib markii ay soo buux dhaafiyeen boqolaal dadweyne ah oo aad u wada qiireesan.
Hooyo magaceeda ku sheegtay Mulka Xasan Warsame oo saxaafadda... Madaxweyne Shariif oo maanta saxiixay Qorshaha ammaanka iyo Xasilinta qaranka NSPP (SAWIRO) Aug 8, 2012 Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta saxiixay qorshaha ammaanka iyo xalisnta Qaranka NSSP, kaas oo lagu shaqeyn doono 5ta sano ee soo socota.
Munaasabad lagu qabtay xarunta madaxtooyada oo ay ka soo qeyb galeen guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, guddoomiyaha maxkamadda sare Avv. Ceydiid C/llaahhi Ilkaxanaf, R/wasaare Dr. C/wali Maxamed Cali, Wasiirka... Akhriso khudbadii Ra’iisul wasaare Gaas ee uu ku sheegaayay inuu yahay musharax u taagan inuu ka qeyb galo doorashada madaxtinimada Soomaaliya (SAWIRO) Aug 8, 2012 Waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u sharaxanyahay xilka madaxaweyananimada. Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi weli Maxamed Cali Gaas, waxaan uu ka hor akhriyey kumaanan qof oo ka soo qayb gashay xaflada khudbad aad uu qiimo badan oo ka hadlaysa waxqabadkii xukuumadiisa Badbaado Qaran iyo waxa u qorshaysan inuu qabto afarta sano ee soo socota hadii loo doorto xilka madaxweynaha dalka.
Waxaan... PRESS RELEASE:- Somali Police Commissioner welcomes the first AMISOM Formed Police Unit in Mogadishu Aug 8, 2012 Mogadishu- August 8th, 2012: The Somali Police Commissioner, General Sharif Shekuna Maye has formally welcomed Formed Police Officers from Uganda who have been deployed in Mogadishu to serve under the police component of the African Union Mission in Somalia (AMISOM).
Speaking during a parade by the AMISOM Formed Police Unit in Mogadishu, General Sharif Shekuna Maye expressed his appreciation to the... Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo la shaaciyay in maalinta beri ah uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho. Aug 8, 2012 Warar goor dhaw soo baxay ayaa waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho maalinta beri ah uu kusoo wajahanyahay Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo isagoona haatan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya.
Gudiga qaban qaabada soo dhaweynta Farmaajo ayaa warbaahinta u sheegay in beri uu imaan doono Farmaajo oo ka mid ah Musharaxiinta u taagan xilka Soomaaliya... Gudoomiyaha dowladda TFG ee deegaanka Lambar 50 oo ku dhintay weerar xalay Al-shabaab ay ku qaadeen Hoygiisa. Aug 8, 2012 Xarakada Al-shabaab ayaa xalay weerar xoog leh waxay ku qaaday Hoyga gudoomiyaha dowladda TFG ee deegaanka Lambar 50 Cabdi Cali Xasan iyadoona gudoomiyaha weerarkaasi uu ku geeriyooday.
Ciidamada ilaalada u ahaa gudoomiyaha ayaa isku dayey inay difaacaan hase ahaatee ciidanka Al-shabaab oo aad u badnaa ayaa gabi ahaanba jiiray ilaaladii iyagoona gudaha u galay hoygiisa ka dibna halkaasi ku dilay... Maxay tahay hadal heenta Reer Muqdisho ee ku saabsan doorashada Madaxtinimo iyo cida ku guuleesan karta (WARBIXIN) Aug 8, 2012 Dhawaan Muqdisho waxaa la filaayaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo musharaxiin badan ay u taaganyihiin, waxaase dhanka kale jirta hadal heen iyo saadaalin ay Afka ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Marka aad tagto meelaha badi ay isugu yimaadaan shacabka ayaa waxaa ka jira waxa loo yaqaano fadhi ku dirir iyo wax la mid ah, waxaana reer Muqdisho ay mar walba afka ku... AMISOM oo magaalada Muqdisho keentay ciidamo Booliis ah (SAWIRO) Aug 8, 2012 Magaalada Muqdisho waxaa maalmahaan lagu soo daabulaayay ciidamo Booliis oo kamid ah AMISOM kuwaa oo ka socda wadanka Uganda si ay uga qeyb qaataan amaanka Soomaaliya.
In kastoo aysan ciidamadaan tiro badneen hadana waxa ay hor dhac u yihiin ciidamo kale oo Booliis AMIOSOM ah oo laga kala keenaayo dalalka Negiria Sera Leone iyo Jabuuti, waxaana ciidankaan ay ka howlgali doonaan saldhigyada Booliiska... Radio Allgedo/ Waraysiyo